China Fiber လေဆာလေသန့်ရှင်းရေးစက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - XTLASER
ပြားနှင့် Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖိုင်ဘာလေဆာသန့်ရှင်းရေးစက်
Ultra-high Power Laser စက်အသစ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
ပြား Tube လေဆာဖြတ်တောက်စက်
ဟယ်လို! ငါတို့က XTLASER! လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကုမ္ပဏီသည်လေဆာစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏နက်ရှိုင်းစွာမွေးမြူရေးကိုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ XTLASER သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဖိုင်ဘာလေဆာသန့်ရှင်းရေးစက်သည်အရာဝတ္ထု၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဗဓေလသစ်၊ ဆေးသုတ်၊ ရေနံအစွန်းအထင်း၊ အစွန်းအထင်း၊ ဖုန်၊ သံချေး၊ ၎င်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ သင်္ဘောများ၊ ကားပြုပြင်ခြင်း၊ ရော်ဘာမှိုများ၊ အဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာများ၊
(1) မြင့်မားသောထိရောက်မှု, ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှု
(၂) Host host system
အဆိုပါ interface ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း, စုံစုံနှင့်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ အမျိုးမျိုးသော parameters တွေကိုလေဆာနှင့် galvanometer ထိန်းချုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
စက်များအားလုံးသည် European Union CE authentication ကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီး F အမေရိကန် FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး ISO 9001.XTLASER နည်းပညာကိုဂျာမနီ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်၊ ရုရှား၊ မလေးရှားနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်နာမည်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။ Fiber လေဆာသန့်ရှင်းရေးစက်တွင်ရိုးရိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ပေါ့ပါးသောကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်း၊ လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်မှု၊ ရှေ့ဆုံးအားဖြုတ်။ အလိုအလျောက်စူးစိုက်မှုရရှိနိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းကိုမထိခိုက်စေဘဲတိကျမှန်ကန်သောတည်နေရာ - လေဆာသန့်ရှင်းရေးစက်သည်အထိခိုက်မခံနိုင်သောအလူမီနီယမ်၊ ကာဗွန်၊ သံမဏိနှင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဖြင့်အားဖြည့်သည့်ပိုလီမာအပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းများကိုမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းနိုင်သည်။
1) Fiber လေဆာသတ္တုမျက်နှာပြင် derusting
၃။ ဖုန်၊ အညစ်အကြေး၊
၅) အောက်ဆိုဒ်မျက်နှာပြင်၊ ရေနံအစွန်းအထင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုသန့်ရှင်းရေး
၈။ ရော်ဘာ၊ ပလပ်စတစ်၊
လေဆာသန့်ရှင်းရေးစက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံ ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
သင်မှလေဆာသံချေးဖယ်ရှားစက်ကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှဖိုင်ဘာလေဆာသတ္တုမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးစက်ကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
XTLASER သည်ကျော်ကြားသော ဖိုင်ဘာလေဆာသန့်ရှင်းရေးစက် ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ဖန်စီဒီဇိုင်းများရှိသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ဖိုင်ဘာလေဆာသန့်ရှင်းရေးစက် ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် CE အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ဖိုင်ဘာလေဆာသန့်ရှင်းရေးစက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!
လိပ်စာ: No.866 Chunyuan လမ်း၊ အရှေ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန်၊ Jinan City, Shandong, China
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Jinan Xintian Technology Co. , Ltd. အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။